प्रमोदवन बंगला - कोहा Rong आइल्याण्ड | आधिकारिक यात्रा गाइड
अन्तिम समय भ्रमण कोह रोंग टीम मा रहयो कोह टच - मा मुख्य पर्यटक क्षेत्र Koh Rong - हामीले प्रयास गर्ने निर्णय गरे प्रमोदवन बंगला.
प्रमोदवन बंगलाले धेरै राम्रो समीक्षाहरू प्राप्त गर्दछन् (यद्यपि धेरै मानिसहरूले यसलाई भ्रमित गर्छन् प्रवासी विला on Koh Rong Samloem - उही कम्पनी तर दुई धेरै फरक अनुभवहरू)। यदि तपाईं Koh टचमा शान राखिएको छुट्टै छुट्टै खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने म यहाँ बस्न सिफारिस गर्दछु, तर के हो चीङगको यस भागमा धेरै रिसोर्ट्सको साथमा, तपाईलाई तयार हुन आवश्यक केहि चीजहरू छन् ...
बंगला एक छोटो 10 मिनेट स्थित हो मुख्य बार्स, रेस्टुरेन्ट र रात क्लब (टाउको दाहिने सम्म जब तिमी नौका छोड्छ) बाट टाढा छ। मेरो विचार यो Koh टच मा सबै भन्दा राम्रो क्षेत्र हो, किनकि तपाईं बस पर्याप्त समय सम्म रात समय शोरबाट परेशान हुनुहुन्न, किनकि समुद्र तट क्लीनर, शान्त र अधिक सुन्दर छ।
बंगला आफैले अत्यन्तै रूचिक-हेर्दै छन्, तर जब यो Koh टचमा सामान्य स्तरमा आउँछ, तिनीहरू त्यहाँ छनौटका विकल्पहरू छन्।
हामी2जोडेहरूको लागि डिजाइन गरिएको बंगलामा बस्थे - त्यहाँ2(सार्थक विशाल) आसन्न कोठाहरू र बाहिर स्नानको साथ साझा साझा बाथरूम थियो। बाह्य बौछार उच्च पर्खालहरु द्वारा संलग्न छ त्यसैले तपाईंलाई देख्नको लागी चिन्ता गर्नु पर्दैन। कोठाहरू सफा र राम्ररी राखिएका थिए, र प्रत्येक बिदा प्रशंसक र मच्छर नेटको साथ आयो। Koh टचमा सबै होटलहरूको रूपमा, कोठाहरू ध्वनि प्रमाणहरू डिजाइन गरिएका छैनन्, त्यसैले मनमा नजानुहोस् यदि तपाईं बङ्गला साझेदारी गर्न चाहानुहुन्छ भने।
प्रमोदवन बंगला मा एक कोठा
सबै सबै म भन्न चाहन्छु कि बङ्गलाहरू Koh Touch को लागि एक राम्रो राम्रो मानक हो - सम्झनुहोस् कि तपाई केवल साँच्चै निद्राको लागि प्रयोग गरिरहनु हुनेछ, जबसम्म तपाईं एक प्रशंसकको छ, केहि सफा पत्रहरू र मच्छर नेट तपाईं ' म ठीक हुनेछु प्रमोदवन बंगलाहरू (हाम्रो4व्यक्ति बंगला $ 80 / रात थियो) को लागि अतिरिक्त तिर्नु पर्ने अतिरिक्त गोपनीयता र सजिलो छ, र निस्सन्देह, समुद्र तटको सबैभन्दा राम्रो भागमा सजिलो पहुँच।
अब ती चीजहरूको लागि तपाईलाई तयार हुन आवश्यक छ ... पहिलो, बङ्गलाहरूमा बिजुली एक्सएनएनक्समममा स्विच हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ झूटको कुनै मौका छैन जस्तो कि यो पछि धेरै ठुलो हुन्छ। यदि तपाईं दयालु व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन प्रारम्भिक उठाउन मनपर्छ र धूपको सबैभन्दा ठूलो बनाउनुहुन्छ, त्यसो गर्दा तपाईले धेरैलाई परेशान गर्नुहुन्न। यद्यपि, यदि तपाईं एक रातको समय बासिन्दा हुनुहुन्छ भने, म निश्चित रूपमा तपाईंलाई अन्य ठाउँमा बस्न सिफारिस गर्दछु।
व्हाइट बीच मा Koh टच
दोस्रो, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाई बाहिर जाने बेलामा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कोठा सफा गर्न वा सफा गरिनेछ। हामीले आइपुग्दा कसैले यो कुरा गरेन, र यद्यपि कोठाहरूमा निर्देशनहरू छन्, हामीसँग विस्तारमा अध्ययन गर्न समय थिएन किनकी हामी धेरै व्यस्त छौं।
अन्तमा, केही कर्मचारीहरू हाम्रो भ्रमणमा सजिलो थिए, तर यो हाम्रो बसको लागि विशेष हुन सक्छ। सामान्यमा, कृपया खमेरसँग रोगी राख्न प्रयास गर्न सम्झनुहोस्, किनकि तिनीहरू पश्चिमी मानक र लजिकिक्समा प्रयोग गर्दैनन्। अन्यथा, फिर्ता झूट र सुन्दर दृश्यहरूको आनन्द लिनुहोस्!
सर्वोत्तम मूल्य मा बुक प्रमोदवन बंगले
यदि तपाईं Koh टच (कोहा Rong मा मुख्य पर्यटक क्षेत्र) मा बस्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ रेस्टुरेन्ट र बारहरू छन् जुन म सिफारिस गर्दछु। (यो पनि हेर्नुहोस: कोह रोंग मा सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र क्रियाकलाप) कोह ...
Koh Rong » ब्लग » होटल समीक्षाहरू » प्रमोदवन बंगला
20 / 07 / 2018 in होटल समीक्षाहरू